“ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံရယ်လို့ ကံသုံးပါးမှာဘယ်ကံက အပြစ်ကြီးပါသလဲဆိုတော့…
ဒီကံသုံးပါးဟာ ကောင်းကျိုးပေးတဲ့ ကုသိုလ်ကံမဟုတ်ဘူး၊မကောင်းကျိုးပေးတဲ့ အကုသိုလ်ကံပဲ။
“ကာယကံဆိုတာ ကိုယ်ဖြင့် ပြုလုပ်တဲ့ အကုသိုလ်ကံကိုဆိုလိုတယ်၊ အဲ့ဒိ အကုသိုလ်ကံဟာ –
(၁) ပါဏာတိပါတ = သူ့အသက်ကိုသတ်တဲ့ကံ၊
(၂) အဒိန္နာဒါန =သူတစ်ပါးပစ္စည်းကို ခိုးယူတဲ့ကံ၊
(၃) ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ = ကာမမှု၌ မှားယွင်းစွာ ပြုကျင့်မိတဲ့ကံရယ်လို့သုံးပါးရှိတယ်။
ဝဋ်ကြွေး ၁၉ ချက်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
၁. ဒီဘဝမှာ လက်ဝတ်ရတနာများ နှင့် အဝတ်ကောင်းများဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက သင်ဟာ ဘုန်းတော်ကြီးများကို သင်္ကန်းကပ်လှုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
၂. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အစားအသောက်ကောင်းများဖြင့် နေရပါသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ပေးကမ်းလှုဒါန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၃. ဘာဖြစ်လို့ ဒီဘဝမှာ ဆင်းရဲပြီး အဝတ်ကောင်းတွေ မဝတ်နိုင်ရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက သင်ဟာ ကပ်စေးနှဲ ကော်တရာဖြစ်ပြီး အလှုမလုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဘုရားအလောင်းတော် အမျိုးသမီးဘဝ ရောက် ဖူးသလား
ဂေါတမဘုရားအလောင်း နုစဉ်ကာလတွင် မိန်းမ ဘဝဖြစ် မဖြစ်နှင့် ဖြစ်သည်ရှိသော် ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပါ သနည်းဆိုသော်ဘုရားအလောင်းတော်ကိုခေတ်နှစ်ခေတ်ခွဲပြီး ပြရ မှာပဲ၊ခေတ်နှစ်ခတ်ဆိုတာက –
(၁) နိယတဗျာဒိတ်မရသေး သော နုသောဘုရား အလောင်းတော်ခေတ်၊
(၂) နိယတဗျာဒိတ်တော်ရပြီးသော ရင့်သောဘုရား အလောင်းတော်ခေတ်-များပေါ့၊
အဲသည် ခေတ် ၂-ပါးနက် ငါသည် သစ္စာလေးပါးကို ကိုယ်တိုင် ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိမြင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်လျှင်ကောင်းမှာပဲလို့ စိတ်ဖြင့် ဘုရား ဆုကို တောင်းသော မနောပဏိဓိခေတ်၊ စိတ်ဖြင့် ဆုတောင်းရုံမျှမကဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်ရပါလို၏လို့ နှုတ်က မြွတ်ဆိုဆု တောင်းတဲ့ ဝါစာပဏိဓိခေတ်၊ သည်ခေတ်နှစ်ခုတို့ဟာ နိယတဗျာဒိတ် မရရှိ သေးတဲ့ နုသောဘုရားအလောင်း ခေတ်ဖြစ်တယ်။
(၁) ဘုရားပန်း နှင့် သောက်တော်ရေ ဆွမ်း ဆီမီး အမြဲကပ်ပါ။
ဘုရားပန်း မနွမ်းပါစေနဲ့။ ဘုရားပန်းအိုးထဲမှ ရေများ မပူပါစေနဲ့။
(၂)ဘုရားရှိခိုးလျင် အိမ်စောင့်နတ် ခြံစောင့်နတ် အိမ်ဝန်းအတွင်း
မြင်အပ် မမြင်အပ် သတ္တဝါများ အားလုံးကို မေတ္တာပို့ အမျှဝေပါ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုဟာ ပါးစပ်ကသာ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြောကြတာ တကယ့်လက်တွေ့ မှာတော့ လွဲချော်မှု့တွေ ရှိနေပြီး တကယ့်ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဖြစ်သေးပါဘူး
ကုသိုလ်လိုချင်လို့ သွားတယ် ဘုရားရောက်တော့
မရှိခိုးသေးဘူး ဘာနေ့ သား ဆိုပြီး မိမိမွေ့ နေ့ နဲ့ 
နေ့ သင့်နံသင့် ဂြိုဟ်တိုင်လိုက်ရှာတယ် ပြီးမှ ဘုရားရှိခိုးတယ် ဂြိုဟ်တိုင်က အကျိုးပေးတာလား
စေတနာက အကျိုးပေးတာလား ခုထိ မကွဲသေးဘူး
“ဟင် ငါ့မွေးနံဘုရားလည်း မဟုတ်သေးဘူး”ဆိုပြီး ကျော်သွားတယ်..
“ငါ့မွေးနံဘုရားမှ မဟုတ်ရင် ငါ့ဆုတောင်းပြည့်မှာမဟုတ်ဘူး”
အတွေးအကြံမှားကြောင့် အကုသိုလ်ဖြစ်တာက များနေပြီ..
ဒီလို အတွေးအခေါ်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ် မဟုတ်ဘူး..
မြတ်စွာဘုရားက ချင်ကို သတ်ပါတဲ့။ ဟိုဟာလိုချင်၊ ဒီဟာလိုချင်၊ ဟိုဟာစားချင်၊
ဒီဟာစားချင်၊ ဟိုကိုသွားချင်၊ ဒီကိုသွားချင် အကုသိုလ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေ ပယ်သတ်ပါတဲ့။
ချင်ဆိုတာ တဏှာကို ပြောတာပါ။ တဏှာကို ပယ်သတ်ဖို့ မြတ်စွာဘုရားက ချင်ကို သတ်ပါတဲ့၊
(၁)သူတစ်ပါး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့(မကောင်းကြောင်း)ကို မမေးဘဲနဲ့ပင် ပြောကြားတတ်ပြီး
မေးလျှင်လည်း ချဲ့ကား၍ ပြောတတ်ခြင်း။
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပဋိသန္ဓေနေစဉ် ရှေ့ပြေးနိမိတ်ကြီး(၃၂)ပါးအကြောင်း
အတုမရှိ၊အတူမရှိ အနန္တဥာဏ်တော်ရှင် ဘုရားဖြစ်တော်မူမည့် ဘုရားလောင်းတော်ကြီးများသည် ပညာဓိက ဘုရားဆုပန်လျှင်လေးသင်္ချေကမ္ဘာတစ်သိန်းတိတိ(စွန့်ခြင်းငါးပါးနှင့်တကွ ပါရမီတော်(၁၀)ပါး အပြား(၃၀)တို့ကို အတုမရှိဖြည်ကျင့်ဆည်းပူးရလေသည်)။သဒ္ဓါဓိကဘုရားဆုပန်လျှင် ရှစ်သင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း၊ဝီရိယဓိက ဘုရားဆုပန်လျှင် ဆယ့်ခြောက်သင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းဖြည့်ကျင့်ဆည်းပူးရပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့ဖြည့်ကျင့်ဆည်းပူးတော်မူသောကြောင့် အသဒိသ၊အတုလ၊ဆ,အသာဓာရဏရွှေဥာဏ်တော်ရှင်ဖြစ်တော်မူမည့်ဘဝမှာ ယူဇနာပေါင်း(၂)သိန်း၊(၄)သောင်းရှိသော မြေအထု၊ ယူဇနာပေါင်း(၄)သိန်း၊(၈)သောင်းရှိသော ရေအထု၊
(၂)။ ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ် = ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး၏ ဖြစ်ကြောင်းတရားကို သိမ်းဆည်းသောဉာဏ်။
၁။ ပိယော = ချစ်ခင်လေးစားလောက်တဲ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အရည်အသွေးတွေ ရှိရပါ
အရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ဥပတိဿ ပရဗိုဇ် ဘ၀ဖြင့် အရှင်အဿဇိထံမှ မြတ်စွာဘုရား၏
တရားတော်ကို နာကြားရ၍ သောတာပတ္တိ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ကို ရခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ဆရာဖြစ်သူ
အရှင်အဿဇိကို ပူဇော်လို၍ ရောက်လေရာ အရပ်တိုင်း၌ အရှင်အဿဇိ ရှိရာအရပ်ဘက်ကို ဦး
တစ်ခါတုန်းက မြတ်စွာ ဘုရားရှင်ဟာ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန် ကျောင်းမှာ
သီတင်းသုံး နေပါတယ်။ ညနေချမ်း ရောက်တော့ ရှင်ရာဟုလာ သီတင်းသုံးရာ
သရက်ဥယျာဉ်သို့ ကြွတော်မူ ပါတယ်။ ရှင်ရာဟုလာက မြတ်စွာဘုရား အတွက်
နေရာခင်းခြင်း၊ ခြေဆေးပေး ခြင်းများ ပြုပါတယ်။ မြတ်စွာ ဘုရားရှင်က
ရှင်ရာဟုလာ ခင်းထားတဲ့ နေရာမှာ ထိုင်တော်မူပြီး တရားစကား သြ၀ါဒ
၁ ။ မည်သူ့အပေါ်တွင် မဆို အရင်းအဖျား မခွဲခြားဘဲ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်း ထားပါ ။
၂ ။ ကောင်းသော ဣဌာရုံနှင့် တွေ့သောအခါ လွန်စွာဝမ်းသာ အားရ သောမနဿ လောဘမဖြစ်ပါနှင့် ။
၃။ မကောင်းသော အနိဌာရုံနှင့် တွေ့သောအခါ၌လည်း ၀မ်းနည်းပက်လက် မနှစ် သက်သောဒေါမနဿဒေါသမဖြစ်ပါနှင့် ။
၄ ။ မိမိပိုင် မဟုတ်သော ပစ္စည်းဥစ္စာများကို မတရား ပိုင်ဆိုင်လို့သည့် မတရားရယူလိုသည့်လောဘ မထွက်ပါနှင့်။ ရောင့်ရဲပါ ၊ တင်းတိမ်ပါ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင် အပေါင်းတို့၏ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်သည် မြတ်နိဗ္ဗာန်ပင် ဖြစ်ပါ
တယ်။ နိဗ္ဗာန်ကိုရရောက်နိုင်ရန်အတွက် တရားကျင့်ကြံအားထုတ်ကြရပါတယ်။ တရားအားထုတ်
ရာ၌ ကိုယ်ရဲ့ခံစားချက် ကိုယ့်ရဲ့အဆင့်နဲ့ ကြည့်ကာ ကိုယ့်သန္တာန်မှာဖြစ်တဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန်
အမေး။ ။ဆရာတော်ဘုရား……. တစ်နာရီအတွင်းမှာပဲ ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်လုံးရွတ်တာနဲ့ ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်ထဲမှ တစ်သုတ်သုတ်ကို တစ်နာရီလုံး ရွတ်တဲ့အနက် ဘယ်ဟာက ပိုအစွမ်းထက်ပါလဲဆိုတာ အဖြေပေးတော်မူပါဘုရား။
အဖြေ။ ။ပရိတ်အစွမ်းထက်ဖို့အတွက် အခေါက်ရေများများ ရွတ်ဖတ်တာ အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ ပရိတ်ရွတ်ဖတ် သူနဲ့ နာယူသူတို့ရဲ့အင်္ဂါပြည့်စုံရင် အစွမ်းထက်ပါတယ်။
ပုဒ်ပါဌ်အက္ခရာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွတ်တတ်ရမယ်။
ကံဟူသည် အတိတ်ကာလ၊ ပစ္စုပ္ပာန်ကာလတို့၌ ပြုခဲ့၊ ပြုဆဲဖြစ်သော ကာယကံမှု၊
၀စီကံမှု၊ မနောကံမှုတို့ ဖြစ်ပါ၏။ “စေတနာကံကို ကံဟု ငါဘုရားဟော၏” စေတနာဖြင့် စေ့
ဆော်၍ ကိုယ် နှုတ် စိတ်တို့ဖြင့် အမှုကိစ္စတို့ကိုဆောင်ရွက်၏။(ဆက္ကအင်္ဂုထ္တုရ်နိဗ္ဗေဓိကသုတ်)
ဗုဒ္ဓဒေသနာများ၏ ညွှန်ပြချက်အရ ဆင်းရဲမွဲတေခြင်း၏ အတိတ်အကြောင်းသုံးပါးကို တွေ့ရှိရသည်။
ယင်းတို့မှာ . . .
(၁) ဒါနမပြုခဲ့သောကြောင့် ဆင်းရဲမွဲတေခြင်း။
(၂) သူတစ်ပါး၏ဥစ္စာကို လိမ်လည်
(၃) ဣဿာမစ္ဆရိယ များခဲ့သောကြောင့်
ဆင်းရဲမွဲတေခြင်း တို့ ဖြစ်ပေသည်။
Misconception #10 လွဲမှားသောနားလည်မူ (၁၀)
တရားဘောကို လေးလေးနက်နက် ဆင်ခြင်ကြည့်ရှုခြင်း နည်းများစွာရရှိပါသည်။ ထိုနည်းများသည် ဝိပဿနာဘာဝနာမဟုတ်ပါ။
ဝိပဿနာသည် သတိတရားမြဲအောင်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ အရှိအတိုင်းသိအောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဝိပဿနာဘာဝနာ ရိုးရှင်းသည့်ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်သက်မူ၊မနှစ်သက်မနှင့်အတွေးပုံရိပ်တို့မပါဝင်သော
ကိုယ်တွေ့ တိုက်ရိုက်ရူပွားမူဖြစ်သည်။ ဘဝ၏ ခဏတိုင်း၊ ခဏတိုင်းကို အရှိအတိုင်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ(ယထာဘူတကျ)စွာ တွေမြင်အောင်အားထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အခြေခံ ၀ိပဿနာ ( ၂ )
အခြေခံ ၀ိပဿနာ (၁)